China PE-RT ashisayo nabandayo amanzi ipayipi ifektri abakhiqizi | UShengyang
Ukuzinza okuhle kakhulu kokushisa nokuqina kokushisa isikhathi eside
Ipayipi ine-homogeneity enhle nokusebenza okuzinzile. Ukufakwa ohlelweni lwamanzi ashisayo kungaqinisekisa ukusetshenziswa kweminyaka engama-50.
Ukusebenza okuhle kokusebenza nekhwalithi ezinzile
Ipayipi le-PE-RT alidingi ukuhamba ngenqubo yokuxhumanisa, ayidingi ukulawula izinga lokuxhumanisa nokufana, kunezixhumanisi ezimbalwa zokukhiqiza, umkhiqizo uyafana, futhi ikhwalithi izinzile futhi inokwethenjelwa. Ivumelana nezimo futhi kulula ukuyisebenzisa
Ingafakwa futhi ifakwe, nge-radius encane yokugoba (i-Rmin = 5D), futhi ayibuyeli emuva. Ingcindezi engxenyeni egobile ingakhululeka ngokushesha, igweme ukulimala kwepayipi lapho kugoba khona ngenxa yokuhlushwa kwengcindezi ngesikhathi sokusetshenziswa. Ukwakhiwa endaweni ephansi yokushisa, asikho isidingo sokushisa ipayipi, ukwakhiwa okulula, ukunciphisa izindleko.
Ukumelana okuhle komthelela nokuphepha okuphezulu
Izinga lokushisa eliphansi lokushisa lingafinyelela ku-70 ° C, elingathuthwa futhi lakhiwe endaweni enamazinga aphansi okushisa; ikhono layo lokumelana nomthelela wangaphandle liphakeme kakhulu kunamanye amapayipi ukuvimbela ukulimala kohlelo olubangelwa ukwakhiwa okunzima.
Akukho ukungcoliswa kwemvelo ngesikhathi sokukhiqizwa, ukwakhiwa nokusetshenziswa. Imfucuza ingabuye isetshenziswe futhi ibe ngeyemikhiqizo eluhlaza.
Ukuqhuba okuhle kokushisa
Ukuqhuba kwe-Thermal ngu-0.40W / mk, kufanelekile ngamapayipi okushisa phansi.
Hot-ncibilika uxhumano, kulula ukulungisa
Ukuxhuma okushisayo, i-PE-RT ingcono kakhulu kune-PEX ngendlela yokuxhuma nokulungiswa.